Romelu Lukaku oo soo Afjaray Abaartii Gool la’aaneed ee garoonka Old Trafford kaddib guushii Fulham…iyo taageerayaasha oo ka hadlay – Gool FM
Romelu Lukaku oo soo Afjaray Abaartii Gool la’aaneed ee garoonka Old Trafford kaddib guushii Fulham…iyo taageerayaasha oo ka hadlay
( Premier League ) 08 Dis 2018. ROMELU LUKAKU oo ugu dambeyn soo gabagabeeyay abaartii gool la’aaneed ee ku heysatay garoonka Old Trafford kaddib markii uu goolkii seddaxaad dhaliyay kulankii Manchester United ay ka adkaatay Fulham.
Lukaku oo 25-jira, ayaa gool ku dhalin waayay garoonkooda horyaalka muddo 997-daqiiqo oo ah 14-kulan, kaddib goolkiisii u dambeeyay uu ka dhaliyay Swansea bishii March.
Ninka Belgian ayaa sido kale caawiyay goolkii Juan Mata oo ahaa kii labaad ee Reds’ ka hor inta uusan nafsad ahaan tiisa dhalin goolkiisa qeybta kowaad – kulankii United ay ku awood roonatay 4-1 iyagoo usoo dhaqaaqay kaalinta lixaad.
Aragti kala duwan ayaa barta Twitter looga hadlay guushan, qaar kamida taageerayaasha ayaa sheegay in goolka Lukaku’ uu soo gabagabeynayo adduunka, halka kuwa kala ay amaaneey dulqaadka weeraryahanka.
Mid ayaa yiri: “Waa markii u horreysay tan iyo March 31, Romelu Lukaku uu gool ku dhaliyo Old Trafford.Mahadsanid Wanaagsan.”
Mid kale ayaa yiri: “Sidaa awgeed waan ku farax sanahay abaarta gool la’aaneed uu ka baxay ninka reer Belgian.”
Waa markii u horreysay tan iyo March 31, Romelu Lukaku uu gool ku dhaliyo Old Trafford.Mahadsanid Wanaagsan.
252 maalin kaddib, Romelu Lukaku ayaa gool ku dhaliyay Old Trafford.
252 maalin 13 kulan iyo 946 daqiiqo ayaa kasoo wareegtay tan iyo Lukaku oo gool ku dhaliyo Old Trafford. Waxyaalaha wanaagsani waxay u yimaadaan kuwa suga.
dhammaadka adduunka ayaa soo dhaw.
Romelu Lukaku ayaa gool ku dhaliyay Old Trafford markii u horreysay tan iyo 31-kii Maarso 2018. Sidaa awgeed waan ku farax sanahay abaarta gool la’aaneed uu ka baxay ninka reer Belgian.
Chelsea oo Jabisay kibirkii City....+SAWIRRO